Misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube momba ny DIY, andrana sns ... Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Miverina ao amin'ny fantsona YouTube aho hamenoana vaovao
Nanomboka nandefa "indray" tao amin'ny fantsona Youtube aho. Nandritra izay taona izay dia namela horonan-tsary 12 momba zavatra samihafa aho, saingy nanomboka namoaka tsy tapaka aho.
Ireo horonan-tsary telo farany izay noraketiko dia mifanaraka amin'ny lahatsoratra navoakako tao amin'ny bilaogy ihany koa, saingy tsy ho toy izany foana. Ny hevitry ny fantsona YouTube dia ny famenoana ny vaovao ao amin'ny bilaogy ary raha mahomby aho dia mety hanana fiainana manokana izany. Te-hamoaka zavatra mahaliana sasany aho nefa tsotra loatra ka tsy manana ny lahatsoratro na izay mety kokoa amin'ny endrika voasoratra ilay endrika horonan-tsary.
Raha te hisoratra anarana ianao azonao atao ny manindry eto efa ho 300 isika :)
Ny horonan-tsary farany ho hitanao raha liana amin'ny fisoratana anarana ianao dia:
Hizaha tenimiafina miafina
Fetsy hahita tenimiafina nefa miafina. Ao amin'ny mandefa fampahalalana marobe ny bilaogy ary mampiseho fomba hafa hahitako azy ireo aho rehefa nitari-dalana azy ireo.
Mamoha finday miaraka amin'ny efijery vaky
Vahaolana mety indrindra ho an'ny finday miaraka amin'ny efijery vaky izay tsy mamaly ny mikasika azy fa azo jerena. Mamela tranga sy loharanom-bola bebe kokoa ao aho Ity lahatsoratra ity.
Izay manombatombako ny fomba isan-karazany amin'ny fanamboarana lanezy vita an-trano. Mifanitsy amin'ny lahatsoratra bilaogy
Araka ny hitanao dia mampiseho zavatra manokana ireo horonantsary ary amin'ny bilaogy dia matetika aho no manitatra ny vaovao. Saingy tsy ny horonan-tsary rehetra no hanana toerana ao amin'ny bilaogy, ny sasany dia ao amin'ny YouTube ihany ary heveriko fa maro no hahaliana anao.
[Nasongadina]Misoratra anarana ary mikapoka ny lakolosy handray fampandrenesana momba ny horonan-tsary vaovao [/ misongadina]
1 Hizaha tenimiafina miafina
2 Mamoha finday miaraka amin'ny efijery vaky
3 Fomba fanamboarana lanezy volomparasy